सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनले आउँछन् यस्ता समस्या, कसरी छुटाउने? :: Setopati
सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनले आउँछन् यस्ता समस्या, कसरी छुटाउने?
मिरा खतिवडा काठमाडौं, जेठ २३
विश्वभर मे ३१ का दिन विश्व सूर्तीजन्य पदार्थरहित दिवस मानाइदैँ आएको छ । तर, वर्षमा एकदिन दिवस मनाएर साँच्चै सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको संख्या कम हुन्छ त ? तथ्याङ्कले भने त्यो देखाउँदैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ् अनुसार सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेर वर्षेनी ज्यान गुमाउनेको संख्या करिब ८० लाख छन् । नेपालमै प्रतिवर्ष २७ हजार १३७ व्यक्ति सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट ज्यान गुमाइरहेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो संख्या नेपालमा मृत्युको १५ प्रतिशत हो ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको तथ्याङ्कले नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने २८.९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । जसमध्ये ४८.३ प्रतिशत पुरुष र ११.६ प्रतिशत महिला छन् ।
नेपालमा हरेक वर्ष सूतीजन्य पदार्थको प्रयोगले लाग्ने उपचार खर्च, अकाल मृत्यु, अशक्त र रोगीको उत्पादकत्वमा आएको ह्रवासमा ४७ अर्ब बराबरको क्षति हुने गरेको केन्द्रका निर्देशक डा. राधिका थपलियाले जानकारी दिइन् । निकोटिन, टार, कार्बनमोनोअक्साइड, एमनिया, रेडनलगायत केमिकल पाइने सूर्तीजन्य पदार्थका सेवनले ज्यान गुमाउनेको संख्यामा धेरै कमि आउन सकेको छैन ।
यसकारण वर्षमा एकदिन दिवस मनाएर मात्रै नभएर हरेक दिन सूतीजन्य पदार्थको प्रयोगले हुने जटिलताबारे जनचेतना फैलाउने पर्ने बताउँछन्, नेशनल कार्डियाक सेन्टर नेपालका वरिष्ठ कार्डियोलोजिष्ट डा.ओममुक्ति अनिल ।
‘हाल कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) का कारण सूर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ता घटेका छन् । तर, यसलाई निरन्तरता दिन आम मानिसमा उत्प्रेरणा जगाउने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ’, उनले भने ।
दैनिक एक/दुईवटा चुरोटको सेवन गर्दा पनि फोक्सोमा क्यान्सर, हृर्दयघात लगायत जटिल समस्या आउने डा. ओममुक्ति अनिलले बताए । उनकाअनुसार सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले मुखको क्यान्सर हुन्छ । ओठ, गिजा, जिब्रोमा घाउ भएर अल्सर हुन्छ र बिस्तारै क्यान्सर हुन्छ । तत्काल असर नदेखिए पनि यसले लामो समयपछि जटिल समस्या निम्ताउँछ ।
सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट आउने समस्यालाई बुझेर मनदेखि नखाने दृढता राखेमा यो लत हटाउन सकिन्छ । यसका लागि हामी मानसिक रुपमै तयार रहनुपर्ने बताउँछन्, डा.ओममुक्ति अनिल । धेरै खाइरहने मानिसलाई एकैचोटि यस्ता पदार्थ खान छोड्दा रिस उठ्ने, मानसिक तनाव हुने, तौल बढ्ने हुन सक्छ। यसकारण एकैपटक नभएर विस्तारै मात्रा घटाउँदै लगेर यो लत छुटाउनुपर्छ ।
सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट छुटकारा पाउन घर, अफिस वा तलतल लागेको जुनसुकै ठाउँमा÷समयमा चक्लेट, ल्वाङ, मिठाइ वा फलफूल जस्ता खानेकुरा खाइहाल्नु पर्छ। यसले तलतल मेटाउन सघाउँछ । यस्तो बानी हटाउने एक महत्वपूर्ण उपाय दैनिक बिहान बेलुका गरिने कसरत पनि हो ।
सूर्तीजन्य पदार्थको लत तथा प्रयोगलाई नियन्त्रणमा ल्याउन छोटो परामर्शले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मनोचिकित्सकहरु बताउँछन् । यस्ता पदार्थको सेवनको लत हटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपायमध्ये उचित परामर्श पनि एक रहेको मानिन्छ ।
यससँगै कुनै न कुनै काममा आफूलाई व्यस्त बनाइ रहनुपर्छ । जस्तैः पत्रपत्रिका वा किताव पढ्ने, गीत सुन्ने, सिनेमा हेर्ने, नाच्न, गाउने आदी । त्यस्ता व्यक्तिले पानी धेरै पिउने बानी गर्नुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यस्ता क्रियाकलाप प्रत्येक दिन गरेर स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने संकल्प लिएमा सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
अध्ययन अनुसार हालसम्म सूर्तीजन्य पदार्थमा ४ हजार बढी रसायनहरु पत्ता लागेका छन् । त्यसमध्ये २५० शरीरका लागि एकदमै हानिकारक छन् । ५० बढी रसायनले क्यान्सर नै गराउने विभिन्न अनुसन्धानहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन्।
सूर्तीजन्य वस्तुमा हुने तत्वले मुखका छालमा समस्या निम्ताउँदै लैजान्छ । यसकारण मुखको आकार सानो हुँदै जाने, खाना खानै नसक्ने, मुख खोल्न गाह्रो हुने तथा खाना चपाउन र निल्नै समस्या हुन्छ ।
मुख, दाँत तथा गिजाको समस्यासँगै पेट, आन्द्रा, फोक्सो र मुटुमा समेत घाउ भएर अल्सर र क्यान्सर भएर मानिसको ज्यान समेत जान सक्छ ।
सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनले श्वासप्रश्वासमा असर पर्ने भएकाले फोक्सोमा क्यान्सर हुने सम्भावना अत्याधिक रहने वीर अस्पतालका वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा अशेष ढुङ्गाना बताउँछन्।
उनका अनुसार ९० प्रतिशत मानिसलाई फोक्सो क्यान्सर धूम्रपानका कारण हुने गर्छ। यति मात्रै नभएर उच्च रक्तचाप भएर मुटुसम्बन्धी दीर्घरोग समेत गराउँछ।
यसले दम हुने, स्वासनलीको क्यान्सर गराउने, रक्तनली बिगार्ने, पाठेघर तथा रगत क्यान्सर हुनसक्छ । यससँगै मष्तिस्कमा समेत गम्भिर असर पर्नसक्छ ।
गर्भवतिले प्रयोग गरेमा कम तौल भएका बच्चा जन्मिने, समय नपुग्दै बच्चाको जन्म हुने, बच्चाको मानसिक तथा शारीरिक विकासमा असर गर्ने तथा गर्भ खेर जाने लगायतका समस्या निम्तिन्छन् ।
पराग, गुट्खाजस्ता सेवन गर्ने अधिकांशले मनलाग्दी थुक्ने गर्छन् । यस्ता सूर्तीजन्य वस्तु चपाएर आफ्नो घर, कार्यालय वा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी थुक्नाले वरपर बस्ने व्यक्तिमा समेत नराम्रो प्रभाव पार्ने डा.ओममुक्ति अनिलले जानकारी दिए ।
नखाने व्यक्तिको नजिक सेवन गर्दा आफूलाइ मात्रै नभएर आफ्नो वरिपरी रहेका व्यक्तिलाई समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पुर्याउँछ ।
तथ्याङ अनुसार १२ प्रतिशत मानिसको आफू नखाएर तर, अरु सेवनकर्ताका कारण मृत्यु हुने गर्छ । हाम्रो जीवनशैली र सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनले पछिल्लो समय संसारभर नसर्ने रोग समेत बढ्दो क्रममा छ ।
यस्ता पदार्थको सेवनले एक होइन अनेक समस्या निम्ताउने हुँदा हामीले समस्या आउनै नदिने सोच्नु उत्तम हुन्छ । त्यसका लागि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई त्याग्नैपर्ने डा.ओममुक्ति अनिल सुझाउँछन् ।
नेपाल सरकारले पनि यस्ता विषयमा ध्यानाकर्षण गरेर सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्ताको संख्या घटाउँदै लानुपर्छ ।
सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन –२०६८, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली –२०६८ र ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका –२०७१ गरी तीनवटा कानून ल्याएको छ।
नीति नियम कडा देखिए पनि नेपालमा कार्यान्वयन भने फितलो भएको पाइन्छ । सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थको निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । साथै यस्ता पदार्थको प्रयोग परित्याग लगायतका कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । तर, पनि परीणाम राम्रो देखिएको छैन ।
यससँगै सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा त्यसको प्रयोगले हुने खतराको संकेत राखिएको छ। सार्वजनिक स्थानमा सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा प्रतिवन्ध नै लगाइएको छ ।नियमित अनुगमन र कार्वाही हुन नसक्दा यसको पूर्ण पालना भएको पाइदैन।
विश्वमा प्रयोग हुने प्रत्येक १० वटा चुरोटमध्ये एउटा चुरोट गैरकानुनी रुपमा बिक्री वितरण भइरहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदै आएको छ । यसको उद्देश्य नै यस्ता पदार्थको प्रयोगमा कमी लेराउनु हो । तरपनि त्यसमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकिरहेको छैन । यस्तो गैरकानुनी विक्री वितरणलाई रोक्न अनुगमन र कार्वाहीको दायारा बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा यस्ता नीति नियम अक्षरमा मात्रै सिमित भएको पाइन्छ । तर, यसलाई आफूबाटै सूरु गरेर व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ ।
यस्ता सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन किशोर, किशोरी, वृद्धवृद्धादेखि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी समेतले खाने गर्छन् । कतिपयले कसैको रहरमा भने कतिपयले तनाव घटाउँछ भन्ने गलत मानसिकताका कारण यस्ता पदार्थको सेवन गरिरहेका छन् ।
यस्ता पदार्थले तनाव घटाउँछ भन्ने सोच्नु भ्रम रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । यसकारण त्यस्ता भ्रमलाई चिर्न आवश्यक छ । हामी स्वयंम, समाज र सम्बन्धित निकाय पनि यस्ता विषयमा सचेत रहन र सचेत बनाउनका लागि अग्रसर रहनुपर्छ ।
सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनको लत हटाउनका लागि आवश्यक सुझाव खुलस्त भएर सम्बन्धित चिकित्सकसँग सल्लाहा समेत लिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २३, २०७८, १७:५८:००
प्रदेश सरकारलाई झण्डै डेढ करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
९७ वर्षकी वृद्धाको अल्का अस्पतालमा हिमीआर्थोप्लाष्टीको सफल शल्यक्रिया
नर्भिकको सेवामा शिक्षकलाई १० प्रतिशत छुट
नर्भिकमा भोलि सर्जिकल ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्टको फ्री ओपिडी हुने
वात्सल्य हेल्थ केयर पाँचौं वर्षमा प्रवेश
औंसी र तीज लक्षित नर्भिकको हेल्थ प्याकेज सार्वजनिक